जब मनिष पलले पुरुषसँग लिपकिस गरे…! « रंग खबर
जब मनिष पलले पुरुषसँग लिपकिस गरे…!
एजेन्सी – भारतीय टेलिभिजन उद्योगको चर्चित नाम हो मनिष पल । उनले टि.भी.का सयौ कार्यक्रम चलाउनुका साथै चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेका छन । उनै मनिषको आज जन्मदिन परेको छ । उनि आज कै दिन सन् १९८१ अगष्ट ३ तारीख जन्मिएका थिए । मनिष आफ्नो विभिन्न कर्तुतका कारण बेला-बेलामा चर्चामा आउँने गर्दछन ।
आज उनको जन्मदिनको अवसरमा तपाईहरुलाई यस्तो जानकारी दिदैछौ जसले गर्दा उनि रातारात भाईरल बनेका थिए । कुरा सन् २०१६ हो एक कार्यक्रमका क्रममा मनिष पल र अनुपम खेरका छोरा सिकंदरसँग यस्तो प्रश्न गरियो के दुबैको हामोसेक्शुअलिटीका लागि बेस्ट फिल्ममा काम गर्ने चाहना छ ?
त्यसपछि दुबैले हो भने। यहाँ सम्मकी हामोसेक्शुअलिटीमाथि फिल्म गर्नमा आफूहरु कति सहज छौँ भन्ने नमुना पनि उनीहरुले देखाए। दुबैले हामोसेक्शुअलिटी देखाउनका लागि जस्तो सुकै गर्न तयार रहेको बताउँदै क्यामेराका अगाडि लिपकिस समेत गरे। उक्त किस सिनपछि उनको चर्चा निकै भएको थियो।